Sandesh Prawahदशैं बिदा मा कुन किताब पढ्ने भनेर अन्योल मा हुनुहुन्छ , यी किताब हरु पढ्नुहोस्। - Sandesh Prawah
दशैं बिदा मा कुन किताब पढ्ने भनेर अन्योल मा हुनुहुन्छ , यी किताब हरु पढ्नुहोस्।
दसैँ राम रमाइलोमा मात्र सीमित राख्नुपर्ने सोच परिस्कृत हुँदैछ । दसैँको समय घुमघाम र अध्ययनका साथै सृजनशील काममा खर्चिनुपर्ने तर्क गर्छन् साहित्यकार गणेश सुवेदी । नाटक, कविता, गीतलगायत साहित्यका विभिन्न विधामा कलम चलाउँदै आएका सुवेदी गीतकार हुन् । चलचित्र गीतका साथै आधुनिक, लोक र राष्ट्रियदेखि प्यारोडी गीतसम्मका शब्द कोरेका उनी अन्य विधाका साहित्य पनि रचना गर्छन् ।
सुवेदी आफू लेखक मात्रै होइन, सक्रिय पाठक पनि हुन् । बजारमा निस्किएका र भेटेका प्रायः पुस्तक अध्ययन गर्ने बानी भएका सुवेदीले दसैँमा अध्ययन गर्न चाहनेका लागि सुझाएका १२ पुस्तकहरु उनकै शब्दमा –
जीवन काँडा कि फूल ?
लेखनमा बेग्लै पहिचान भएका अमर न्यौपानेको कृति हो ‘सेतो धरती’ । ९ बर्षीया बालिकाले विभिन्न बाधासँगै जीवनलाई कसरी सञ्चालन गरिन् भन्ने हृदयविदारक अवस्था उपन्यासमा पढ्न पाइन्छ । यो समयका लागि यो उपन्यास चुनौतीपूर्ण छ । दिनदिनै प्रेमी प्रेमीका फेर्ने अहिलेको समयमा एउटा बिधवा बालिकाले त्योबेलाको सामाजिक ताडना खेप्दै जीवनलाई कसरी चलाइन् होला ?
बस्ती नै बदनाम भएको के हो ? पाठकका लागि अनौठो विषय हो ‘बदनाम बस्ती’। मध्य तथा सुदरपश्चिमबासीका लागि नौलो विषय होइन । उपन्यास नेपाली चलचित्र, टेलि चलचित्रमा कथा, पटकथा र सम्बाद लेखकका रुपमा परिचित ओम प्रतीक गुरुङले लेखेका हुन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछिको घटनाक्रमलाई लेखकले कथानक रुप दिएर यो किताब तयार पारेका छन् ।
सामाजिक यर्थाथवादी उपन्यासको परिचय यसले बोकेको छ । गणिकाबृत्ति (वेश्यावृत्ति) अर्थात पिछडिएको लोपोन्मुख बादी जातिभित्रको अन्तरकथा नै कृतिको सार हो । ‘बदनाम बस्ती’ मानवीय सम्बेदना, प्रेम र अन्तरद्वन्द्वको विश्लेषण पनि हो । फिल्मी लेखक निर्देशकका रुपमा पाठकको रुचि राम्रोसँग बुझेका गुरुङको लेखकीय अभिव्यक्तिले पाठकलाई बाँध्नेछ । किनकि, उपन्यासका हरेक पात्र र घटनाक्रम फिल्मको पर्दामा झैं पाठकको दिमागमा खुल्दै जानेछन् ।
पुस्तकको अन्त्यमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको उत्पत्ति, विकास र सम्भावनाको चिरफार छ । विस २००६ मा स्थापना भएको नेकपा, त्यसका कैयौँ उकाली, ओराली, विभाजन, जनआन्दोलन, जनयुद्ध हुँदै पुनः दुई तिहाई नजिक पुगेको नेकपासम्मको नालीबेली केलाइएको छ । पुस्तकको अन्तिम तथा पाँचौँ खण्ड विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित छ । पुस्तकको अन्त्यमा लेखक तिमिल्सिनाले आजका वैज्ञानिक अन्वेषणहरुसँग यथोचित सन्तुलन र सरोकार राखेर मात्रै क्रान्तिकारी माक्र्सवादको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेका छन् । कम्युनिस्ट राजनीतिमा आकर्षित हुँदै गरेका नयाँ युवा पुस्ताको आधारभूत ज्ञानको भोक मेट्न यो पुस्तक काम लाग्न सक्छ भनि रातोपाटि मा लेखिएको छ ।